हरेक मानिस महान बन्न सक्छ
घाटगाउँ डटकम शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००
बब रिचर्डस्, ओलम्पिक खेलाडी
म त्यो समय कहिल्यै भुल्दिन, जब म डच वार्मरडमको रेकर्ड तोड्ने कोसिसमा लागेको थिएँ । म उनले राखेको रेकर्डभन्दा एक फुट तलसम्म मात्र जान सकेको थिएँ, यसैले मैले उनलाई फोन गरें । मैले उनीसँग सोधें, “डच, के तपाईंं मेरो मद्दत गर्न सक्नु हुन्छ ? म अब अरु माथि जान सकिरहेको छैन । म के कारणले माथि जान सक्दिन ।”
उनले भने, “निश्चित रुपले म मद्दत गर्नेछु । आएर मसँगै बस । म तिमीलाई मेरो कला सिकाइदिनेछु ।” म संसारका सबैभन्दा महान् पोल वाल्टरसँग तीन दिन बसें । ती तीन दिनमा डचले आफ्नो सारा ज्ञान मलाई दिए । मैले कैयौं गल्ती गरिरहेको थिएँ जुन उनले सुधार गरिदिए । यस बारेमा एउटा लामो कथा छ तर संक्षेपमा म बताउनेछु, म आठ इन्चमाथि पुगें । ती महान् मानिसले मलाई आफ्नो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान दिए । मैले थाहा पाएँ खेलको च्याम्पियन र हीरोले तपाईंंलाई महान् बनाउन खुसी–खुसी मद्दत गर्नेछन् ।
महान् यु.सी.एल.ए. बास्केटबल कोच जोन वुडनको फिलोसफी यस्तो थियो, हरेक दिन उनी कुनै यस्तो मानिसको मद्दत गर्ने गर्थे जसले बदलामा उनको मद्दत गर्न नपाओस् । यो उनको कर्तव्य थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००
सुनको मूल्य फेरी घट्यो शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००
खुल्न थाले शक्तिपीठ शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००
क्याम्पसमा गोली चल्दा आठ जनाको मृत्यु शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००
हिलोले कर्णाली राजमार्गमा सवारी साधनलाई सास्ती शुक्रबार, असोज २, २०७७, ०२:१३:००